Fanaterana fehezam-boninkazo ao Moskoa
Fandoavana fandefasana fehezam-boninkazo.
Androany dia misy safidy roa fandoavam-bola azo atao amin'ny famandrihana voninkazo:
1. Karatra banky
Azonao atao ny mandoa amin'ny karatra VISA, VisaElectron, MasterCard, Maestro, MIR, ary ankoatr'izay, miaraka amin'ny karatry ny rafitra fandoavam-bola iraisam-pirenena - VisaInternational, MasterCardInternational, DinersClubInternational, AmericanExpress.
Ny interface interface fandoavam-bola dia tsotra sy intuitive:
Ny fandoavana ny karatra dia entina amin'ny alàlan'ny rafitra fandoavam-bola mandeha ho azy "CloudPayments". Ato anatin'ny folo minitra dia azonao atao ny mandà ny fandoavana ilay baiko. Raha mihoatra ny fotoana, ary mbola tsy nandray fanapahan-kevitra momba ny didy ianao dia ho foanana ny fangatahana.
Taratasy fanamarinana amin'ny fanarahana amin'ny "CloudPayments" PCIDSS:
Raha tsy miala amin'ny fepetra takian'ny rafitra fandoavam-bola iraisam-pirenena, mba hampitomboana ny haavon'ny fiarovana, ny teknolojia farany ampiasaina - 3D Secure / SecureCode. Fenoy ny takelaka, hamafiso ny fandoavanao amin'ny bokotra manokana ary ampidiro ny kaody voaray avy amin'ny SMS ao amin'ny saha sahaza azy. Mety holavina ianao raha tsy manana taratasy fanamarinana amin'ny fampiasana an'ity haitao ity ny bankinao.
Raha te-hahazo antsipiriany bebe kokoa momba ny fandoavam-bola amin'ny karatrao amin'ny Internet ianao, hamahana ny olana amin'ny fandoavam-bola, antsoy ny serivisy fanampiana banky amin'ny laharana voalaza ao anaty karatra.
2. Fandoavana vola tsy misy antonona ho an'ireo fikambanana ara-dalàna
Ny fikambanana ara-dalàna dia mandoa ny kaomandy amin'ny kaonty amin'izao fotoana izao, araka ny faktiora navoakan'ny rafitra.
Raha te-hahazo faktiora ho an'ny fandoavam-bola, rehefa mametraka kaomandy dia mifidiana fomba fandoavam-bola ho an'ireo fikambanana ara-dalàna ary ampidiro amin'ny antsipiriany ny antsipirian'ny fikambanana misy anao ary ny rafitra dia handefa faktiora voaforona ho azy amin'ny adiresy mailaka voalaza:
Rehefa avy nandoa vola ianao dia hahazo SMS, mailaka ary fampandrenesana ao amin'ny kaontinao manokana fa efa nohajaina ilay baiko.